Wararka - Sidee bay u tahay koox iska caabin ah oo yar - oo muruqyadaada ka dhigi karta kuwo si feejigan u istaaga?
Sidee bay u tahay koox iska caabin ah oo yar - oo muruqyadaada ka dhigi karta mid u fiirsata sida kale oo kale?
Dhab ahaan, tababbarka kooxda iska caabbinta ayaa la muujiyey inuu yahay “beddel macquul ah” oo kor loogu qaadayo culeyska marka ay timaaddo dhaqaajinta muruqyadaada, sida lagu sheegay cilmi -baaris dhowaan lagu daabacay Joornaalka Kinetics -ka Aadanaha. Qorayaasha daraasaddu waxay isbarbar dhigeen firfircoonida muruqa intii lagu guda jiray laylisyada tababarka xoogga sare ee jirka oo leh kooxo iska caabin ah oo ka soo horjeeda culeysyo lacag la'aan ah waxayna heleen natiijooyinka inay aad isugu eg yihiin. Waxay rumaysan yihiin in xasillooni -darrada ay abuureen kooxuhu ay tahay waxa sababa in fiilooyinka muruqyada ay dab ka shidaan xitaa marka loo eego miisaannada xorta ah.
Intaa waxaa dheer, sida tababaraha shahaadadda leh Sarah Gawron tilmaamayso: “Waxay hagaajin karaan dabacsanaanta, dhaqdhaqaaqa, iyo xoogga.” Xataa kuma qaadato waqti dheer in la arko farqiga. Shan usbuuc oo tababarka kooxda iska -caabbinta ah ayaa ku filan in si weyn loo wanaajiyo murqaha iyo dabacsanaanta bowdada gudaha maaddooyinka ka qaybgalay daraasad cusub oo lagu daabacay Joornaalka Sayniska Ciyaaraha & Daawada.
Tani waa war weyn oo dhan, gaar ahaan haddii aad guriga ka shaqeyneyso maadaama kooxaha iska -caabbintu ay yihiin kuwo raqiis ah oo aan qaadan meel badan. Laakiin, waa kuwee kuwa u qalma iibsiga? Waxaan la hadalnay lix tababarayaal shaqsiyeed oo sarsare waxaanan ku shubnay daraasiin faallooyin oo ka yimid isticmaaleyaasha aadka u xamaasadda badan si aan kuugu soo qaadno liiskan kooxaha ugu fiican iska caabinta. Waxaan xitaa calaamadeynay kuwa ku habboon noocyada jimicsiga. Markaa ku dheji oo kor u qaad intaad awooddo.
Astaamaha sare ee kooxda iska caabinta
Kooxaha Joogtada ah ee Soo Jiidashada leh iyo Tayada leh: NQFITNESS Kooxaha iska-caabbinta waxaa laga sameeyay alaab cinjir ah oo dabiici ah, taas oo ah iska caabin xoog leh oo u adkaysan karta xoog xad-dhaaf ah. Waxaad tabobari kartaa adigoon walwal ka qabin jeexitaan ama xirasho.
U Fiican Fidinta iyo Iska -caabbinta: Kooxaha iska -caabbintayadu waxay u shaqeeyaan qof kasta oo u baahan fidinta muruqyada xanuunsan ka dib tababarka iyo kuwa adag ka hor tababarka. Waxaad u isticmaali kartaa si aad u fidiso ka hor inta aan la qaadin dhiqlaha
Kooxaha Wax-ka-qabadka Badan: Kooxaha wax-iska-caabbinta waxaa loo adeegsan karaa jimicsiyo badan, sida tababar xoog leh, jiidisyo caawiya, tababarka xiisadda kubbadda koleyga, kululaynta iwm.
Ku Fiican Tababbarka Jimicsiga Guriga: Waxaad ku dari kartaa jimicsiga gurigaaga. Waxay kaa caawin doontaa in lagugu soo jiido guriga. Waxaa loo isticmaali karaa siyaabo badan oo kala duwan.Waxaad u isticmaali kartaa si aad u soo jiiddo oo aad u quusiso caawinta, fidinta, iyo xitaa inaad ku darto xoogaa iska caabin ah oo aad ku samayso.
4 Heerarka Kooxaha Resistance: Soo jiid kooxaha caawinta waxay ku yimaadaan 4 heerar iska caabin ah, midab kastana waa iska caabin kala duwan iyo ballaar ujeedooyin kala duwan. Kooxda Cas (15 - 35 lbs); Kooxda Madow (25 - 65 lbs); Kooxda Purple (35-85 lbs) ； Cagaar (50-125lbs).